बी.एस. नीरव, Author at साहित्यपोस्ट | Page3of 268
अघिल्लो साल उनी दुई जिउकी भएकी थिइन् । श्रीमान् ले गर्भ जाँच गर्न लगाए । कन्याले बास लिएकी रहिछन् । जबरजस्ती उसले गर्भपतन गरायो । छोराको आशमा निर्दोष छोरी पतन गराएपछि अर्को साल उसले चिना फुकायो । ज्योतिषीले ग्रह शान्ति गर्न सुझाए…
किशन पौडेलका तीन लघुकथाहरु
१. औकात ऊ जुत्ता किन्न एडिडासको सो रुमभित्र पस्यो । धेरैबेर जुत्तालाई ओर्काइफर्काइ हेर्यो । जुत्तामा टाँसिएको मूल्यको लेभल गहिरोसँग नियाल्यो र लामो श्वास फेरेर ऊ फुत्त बाहिर निस्क्यो । बगली छाम्यो..अनि नजिकै रहेको गोल्डस्टार सो रुमभित्र…
धोती में राधेश्याम !
२०३२ सालमा भुक्के केटो थिएँ । लोभलाग्दो ज्यान थियो । त्योभन्दा अघि चार–पाँच वर्षको कुरा सम्झिन्छु । छेवर गरेको थिएन । कपाल लामो–लामो थियो । आमाले तेल लाएर चडक्क पारेर कोरी दिनुहुन्थ्यो । बेला–बेलामा बाटी पनि दिनुहुन्थ्यो । खासगरेर विराटनगर…
कथाः कागको मृत्यु
कथामा प्रथम व्यक्तिवाचक भए पनि तृतीय व्यक्तिवाचक भए पनि केही असम्बद्ध हरफहरु आएका हुन्छन् । कसैसँग असम्बन्धित । त्यो वाक्यको वक्ता को थियो नजानिने गरी अथवा कसलाई सो वाक्य भनिएको हो, नजानिने गरी । पात्र परिचयभन्दा बाहिरबाट । जस्तै,…
खलिल जिब्रानका पाँच लघुकथा
तीन कमिला एक जना मानिस खेतमा गहिरो निद्रामा निदाइरहेको थियो । उसको नाकमा तीन वटा कमिला भेला भए । तीन वटै कमिलाले आफ्नो प्रथाअनुसार एकअर्कालाई अभिवादन गरे र वार्तालाप गर्न थाले । पहिलो कमिलाले भनी, 'मैले यस पहाड र उपत्यकाजस्तो बाँझो…
महामारीले कविहरूलाई दिएको एउटा फाइदा
'द ह्वाइट गडेस' जस्तो प्रख्यात कविताकृतिका सर्जक रोबर्ट ग्रेभ्सले जीवनभर यति गरिबीमा जीवन बिताए कि उनले लेखेको एउटा कविता निकै चर्चित बन्यो । कविता थियो- काव्यमा दाम छैन तर दाम कमाउनुमा पनि कुनै काव्य देख्दिनँ सामान्यतः संसारभरि…
अघिल्लो 12345 … 268 पछिल्लो